Rita, Writing for My Sake!: အသုံးမကျတဲ့ စိတ်ကူး
Posted by Rita at 4/29/2010 11:49:00 AM
Why did you write these words?
will need to writeanew post to answer.
အင်း သနားစရာ လူတွေ ကတော့ ပြီးသွားပြီ ဘလော့ဂ် ပေါ်မှာတော့ မပြီးနိုင်တော့
အဟဲ ညီမပြောတာ ဒီအကြောင်းလား မသိ
1/2 true အစ်မ။
တကယ်က အတည်ပြုလိုက်နိုင်ကတည်းက ခုချိန်ထိ စိတ်ထဲမှာ မကြည်လင်နိုင်သေးတာ။ တငွေ့ငွေ့နဲ့ပဲ။
ဇွန်က ရီတာ့ကို ခင်တော့ ပြောချင်ပါတယ်။
အကုသိုလ်ကြောင့် အကုသိုလ်မဖြစ်စေချင်ဘူး။ ဖြစ်ပြီးသွားရင်လည်း ဆက်အဖြစ်မခံနဲ့တော့လေ..နော်။ နို့မို့ဆို အကုသိုလ်စိတ်တွေ လျော့မသွားဘဲ ပြန်တွေးမိတိုင်း တိုးတိုးနေမှာလေ။
ဒီတစ်ခါ အတော်ကို ထိန်းနိုင်ခဲ့တာလို့ ပြောရမှာ။ စတဲ့ရက်ကတည်းက ခုချိန်ထိ။
ဖြစ်ပြီ သေချာတယ် လို့ သိလိုက်ရတဲ့ အချိန်မှာ ဆက်စပ်ရာပတ်သတ်ရာတွေကို လိုက်ပူလိုက်ရတဲ့ အပူကို ပူလိုက်ရတဲ့ သူတွေပဲ သိမှာ။
အဲဒီနောက်ပိုင်း ဂဂျိုးဂဂျောင်တွေ ရေးကြပြောကြတာမြင်ရတော့ ဘယ်ဘက်ဆိုတာ မရှိတော့ဘူး။ အားလုံးကို မမြင်ချင်တော့ဘူး ဖြစ်သွားတယ်။
ဒီနေ့ကတော့ တော်တော်ကို လက်ယားလာလို့။
စိတ်ကောင်းကောင်းထားမိလို့ ဒီလို စိတ်ကူးရတာ မမ။
စိတ်ကောင်းသာမရှိရင် ဗုံးခွဲမိရင်မိ၊ ဒါမှမဟုတ် ကွဲတဲ့ဗုံးဟာ ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တယ်ဆိုတဲ့ စကားကို ပြောမိမှာ။ ဒါမှမဟုတ် သေသွားတဲ့လူတွေ ဒီလို အေးရာအေးကြောင်းရှာနေလည်းပဲ သေတတ်တာ ခုတော့ သိပြီမို့လား၊ အသက်နဲ့ ရင်းလို့ သင်ခန်းစာရကြပြီမို့လား ဆိုတဲ့ လူဦးနှောက်က ထွက်လာတာနဲ့ မတူတဲ့ စကားမျိုးကို ပြောမိမှာ။
စိတ်ကောင်းထားနိုင်လို့ သူတို့ကို ယာဉ်ပျံကြီးနဲ့ ဘေးမသီ ရန်မခ ဝေးရာ ပို့ပေးချင်ရုံလေးတင်။ ကိုယ်တိုင်ကတော့ သူတို့ကို လက်ဖျားနဲ့တောင် တို့ဖို့ စိတ်ကူးမရှိပါဘူး။ ပျော်စရာကြီးလေ။ အဲဒီ ဂြိုဟ်ပေါ်မှာ အပြန်အလှန် ကိုက်နေကြရုံပဲ။
အခုတလော ကိုက်တဲ့အကြောင်းတွေ ပြောနေတယ်နော်။ စိတ်ထိမ်းပါအေ။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ကို့အကြောင်း ကိုယ်ဖော်ပြတာ မိုက်ရာကြပါတယ်